ကားရေတိုင်ကီလို့ပြောလိုက်ရင် အခုခေတ်ကားမောင်းသူတွေ မသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကားရေတိုင်ကီ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ? ကားရေတိုင်ကီ မကောင်းရင် ဘယ်လိုရောဂါလက္ခဏာတွေပြမလဲ? ဘယ်လိုပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူနည်းပါးပါလိမ့်မယ်။
Radiator လို့ခေါ်တဲ့ကားရေတိုင်ကီဆိုတာ တကယ်တော့ တချို့လူတွေထင်သလို ရေတွေကိုသိုလှောင်ထားတဲ့ ရေတိုင်ကီသီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ Radiator ဆိုတာ အပူနဲ့ဖိအားတွေကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး အင်ဂျင်ကအပူတွေကို စွန့်ထုတ်ပေးတဲ့ Heat Exchanger တစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့ နေ့စဉ်အသုံးပြုပြီး မြင်တွေ့နေရတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးဟာ အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး စွမ်းအင်ရတဲ့ (Internal Combustion Engine) အမျိုးအစားတွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူတွေကိုစွန့်ထုတ်ပြီး သတ်မှတ်အပူချိန် (Normal Operating Temperature) တစ်ခုမှာ ထိန်းချုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို အပူချိန်ထိန်းချုပ်စွန့်ပစ်တဲ့အအေးပေးစနစ်မှာ Air Cool နဲ့ Water Cool ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိကာ ဒီရေတိုင်ကီပါဝင်တဲ့ အမျိုးအစားကတော့ Water Cool ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နယ်တွေမှာစီးနေကြတဲ့ တရုတ်ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်တွေကတော့ ရေတိုင်ကီမပါတဲ့အတွက် Air Cool အမျိုးအစားကို သုံးထားတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အင်ဂျင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်စီမှာ အပူအလွယ်တကူပြန့်ကားနိုင်တဲ့ လေအလွယ်တကူထိတွေ့နိုင်တဲ့ ဒလက်ဇောင်းလေးတွေ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ရေတိုင်ကီ (Radiator) ကိုဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲ?
ရေတိုင်ကီတွေရဲ့ ရေအဝင်အထွက်လိုင်းတွေရဲ့တည်ဆောက်ပုံအရ ယေဘုယျအားဖြင့် Horizontal (ရေပြင်ညီ) ပုံစံနဲ့ Vertical (ဒေါင်လိုက်) ပုံစံဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ရေတိုင်ကီဆိုတာ အပူနဲ့ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့သတ္တုလိုင်းလေးတွေကို အတူတွဲပြီးတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတော့ ပျားအုံပုံ သတ္တုလိုင်းတွေကိုအတွဲလိုက်အစုလိုက်လုပ်ထားတတ်ပြီး ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ အစရှိတာတွေနဲ့ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ သယ်ယူရလွယ်ကူသလို ပေါ့ပါးတဲ့ အလူမီနီယံတွေနဲ့ ပြုလုပ်လာကြပြီး ရေတိုင်ကီရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ခြေအဖုံးတွေကိုလည်း ပေါ့ပါးအောင် ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားတွေ အသုံးပြုလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။
Radiator တွေကို အဓိကအားဖြင့်
၁။ Main Inlet
၂။ Main Outlet
၃။ Fin and Tubes
ဆိုပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ ရေတိုင်ကီမှာပါဝင်တဲ့ Tubes ပါဝင်မှု အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး2လိုင်းသွား3လိုင်းသွားအစရှိသဖြင့်လည်း ခွဲခြားထားပါသေးတယ်။
ရေတိုင်ကီထဲကို Coolant ရေတွေထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘာဆက်ဖြစ်လာသလဲ? ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုရင်တော့ ရေတိုင်ကီထဲကရေတွေကို Water Pump ကနေတစ်ဆင့် အင်ဂျင်ထဲမှာရှိတဲ့ရေလိုင်းတွေထဲ သယ်ဆောင်သွားတယ်။ အင်ဂျင်ဟာသတ်မှတ်အပူချိန် တစ်ခုမရောက်မခြင်း Thermostat က မဖွင့်ပေးသေးတဲ့အတွက် အင်ဂျင်ထဲမှာပဲလည်ပတ်နေမယ်။ အဲဒီရေတွေက အင်ဂျင်ရဲ့အထဲမှာလည်ပတ်နေပြီး အင်ဂျင်ရဲ့ (Normal Operating Temperature 96 ံC ကနေ 100 ံC) ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ Thermostat Valve က ဖွင့်ပေးပြီး အင်ဂျင်ထဲမှာရှိတဲ့ရေပူတွေဟာ ရေတိုင်ကီထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ်။ ရေတိုင်ကီထဲပြန်ရောက်လာတဲ့ ရေတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ Tubes တွေထဲကိုဝင်မယ်။ အဲဒီ Tubes လေးတွေနဲ့ကပ်လျက်တည်ရှိနေတဲ့ Fins ဆိုတဲ့လှိုင်းပုံစံ အတွန့်တွန့်လေးတွေကနေတစ်ဆင့် အပူလျှောက်စီးကူးခြင်းနည်းနဲ့ အပူကိုစွန့်ထုတ်မယ်။ အပူပိုပြီး မြန်မြန်စွန့်ထုတ်နိုင်အောင် Radiator Fan လို့ခေါ်တဲ့ Cooling Fan တွေက လည်ပတ်ပြီး အပူကိုကူစုပ်ယူပေးမယ်။ ရေတွေပူလာတဲ့အခါ ဖိအားလည်းအလိုလိုမြင့်တက်လာပြီး ရေတိုင်ကီအဖုံး (Radiator Cap) မှာရှိတဲ့ စပရင်ကို တွန်းကန်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါ ရေတိုင်ကီထဲကရေပူတွေကို ရေပြန်ဘူး (Reservoir or Expansion Tank) ထဲမှာသွားရောက် အအေးခံရတယ်။ အအေးခံပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ရေတိုင်ကီထဲမှာ Vacuum လေဟာနယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့် အအေးခံထားတဲ့ Coolant တွေကို ပြန်လည်စုပ်ယူပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် ရေတိုင်ကီတစ်လုံးကို Cooling System အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
ရေတိုင်ကီ Radiator မကောင်းရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေပြမလဲ?
၁။ Heat Gauge မှာ Heat တအားတက်လာတာ
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ Radiator ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေက ကားအင်ဂျင် Overheat မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပြီး Radiator ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုခုချို့ယွင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ကားအင်ဂျင်အပူချိန်လွန်ကဲတဲ့ Overheat ဖြစ်လာတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ကားဒိုင်ခွက်တွေထဲက Heat gauge မှာ ပုံမှန်ရှိနေရမယ့် H နဲ့ C ကြားမရှိဘဲ H အမှတ်နားကို ရုတ်တရက်ထိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ကားရေတိုင်ကီနဲ့ အခြားဆက်စပ် Cooling System တွေကို စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကားတွေမှာတော့ Heat Gauge ကို Digital နဲ့ပြသတတ်ပြီး အစိမ်းရောင် Heat Gauge ကနေ အနီရောင် Warning Sign တွေပြနေပြီဆိုရင်တော့ သတိထားပြုပြင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်တတ်တာကတော့ ရေတိုင်ကီထဲမှာ ကြေးနဲ့အညစ်အကြေးတွေပိတ်ဆို့တာ၊ သံကြေးတက်ပြီး သံကြေးနဲ့အခြားအညစ်အကြေးတွေကို ရေတိုင်ကီလိုင်း Tubes လေးတွေထဲမှာ ပိတ်ဆို့ကုန်တာကြောင့် ရေတိုင်ကီထဲမှာရှိတဲ့ Coolant တွေ မလည်ပတ်နိုင်ဘဲ ပိတ်ဆို့ကုန်တာ စတာတွေကြောင့် Heat တက်တာတွေဖြစ်လာရတာများပါတယ်။
၂။ Coolant တွေယိုစိမ့်ထွက်တာ
ရေတိုင်ကီထဲ ကြေးနဲ့အခြားအညစ်အကြေးတွေ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ရေတိုင်ကီ အပေါ်ဖုံး၊ အောက်ဖုံးတွေနဲ့ အခြားလိုင်းတွေမှာ အပေါက်သေးသေးလေးတွေဖြစ်ပြီး Coolant တွေ ယိုစိမ့်ထွက်တာတွေကလည်း အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ကားရပ်ထားတဲ့ အချိန်နဲ့ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ကားရေတိုင်ကီကနေ ရေတွေနည်းနည်း ဒါမှမဟုတ် များများစားစားစိမ့်ထွက်နေတာကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားရေတိုင်ကီထဲမှာ အညစ်အကြေးတွေ စုပုံလာရတာကလည်း အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ Coolant တွေကို ပုံမှန်မသုံးစွဲတာ၊ လမ်းဘေးဘုံဘိုင်ရေကိုသုံးတာနဲ့ ရေတိုင်ကီကိုပုံမှန် ဖြုတ်ဆေးကျောမှုတွေကို မလုပ်တာကြောင့် ရေတိုင်ကီထဲမှာသံကြေးတက်စေပြီး ရေတိုင်ကီနံရံတွေကို စားစေတာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Coolant ရေတွေ အရောင်ပျောက်ကုန်တာ
အခုလက်ရှိကားလောကမှာ Coolant ရေအမျိုးအစား မျိုးစုံသုံးစွဲကြပါတယ်။ အသုံးအများဆုံး အရောင်တွေကတော့ အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်ပါပဲ။ အခြား အပြာနဲ့ပန်းရောင်တွေလည်း သုံးစွဲတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို ရေတိုင်ကီထဲမှာ သုံးစွဲထားတဲ့ Coolant တွေဟာ ရေတိုင်ကီထဲမှာရှိတဲ့ အခြားအညစ်အကြေးတွေကြောင့် အရောင်ဖျော့သွားတာ၊ အခြားဆီကွက်လို အကွက်တွေထလာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေပြန်ဘူးထဲကို ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေဆိုရင် Coolant တွေက အဖတ် အဖတ်တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားတာတွေတောင် ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် Coolant ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိလျော့နည်းသွားတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေတိုင်ကီနဲ့ အခြားရေလိုင်းတွေထဲမှာ အလွယ်တကူ မလည်ပတ်နိုင်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
၄။ ရေလှိုင်းပုံ Fin တွေမှာ အမှိုက်တွေ၊ ဖုန်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေပိတ်ဆို့တာ
ဒါကလည်း ဖြစ်နေကျရောဂါတစ်ခုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံလို ဖုန်တွေ၊ သဲတွေ၊ အမှိုက်သရိုက်တွေပေါများတဲ့နေရာမှာ အပူလျှောက်ကူးစေတဲ့ ဒီရေလှိုင်းပုံ အတွန့်အတက်လေးတွေမှာ ပိတ်ဆို့နေတာတွေများပါတယ်။ ဒီကောင်လေးတွေရဲ့အလုပ်က အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ရေတိုင်ကီ Tubes ထဲက အပူတွေကို အလွယ်တကူပြန့်သွားနိုင်အောင် ကူညီပေးတာရယ်၊ ဒီကောင်လေးတွေဆီရောက်လာတဲ့အပူတွေကို ပန်ကာကနေ အလွယ်တကူစုပ်ယူသွားနိုင်အောင်ရယ် လုပ်ထားတာပါ။ ဒီကောင်လေးတွေမှာ ကြေးတွေ၊ ဖုန်တွေ၊ သဲတွေနဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ ကပ်ငြိနေမယ်ဆိုရင် အပူစီးကူးမှုတွေကိုလျော့ကျစေပြီး Cooling System ကြီးတစ်ခုလုံးကို အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်ပါတယ်။ တချို့ကားရေဆေးတဲ့အခါမှာ High Pressure Pump တွေနဲ့ ရေတိုင်ကီတွေကိုထိုးဆေးတာတွေကြောင့်လည်း ဒီ Fin လေးတွေပျက်စီးပြီး၊ လေဝင်လေထွက် ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘဲ ကား Heat တက်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ရေတိုင်ကီအဖုံး Radiator Cap မကောင်းရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ပြတတ်သလဲ?
၁။ Coolant တွေယိုစိမ့်ထွက်တာ
ရေတိုင်ကီအဖုံးက ပုံမှန်အတိုင်း ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုရင် Coolant တွေကယိုစိမ့်မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရေတိုင်ကီအဖုံးက ဂျမ်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရေတိုင်ကီအဖုံးထဲမှာရှိတဲ့ စပရင်တွေက မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘဲ ရေတိုင်ကီထဲမှာ ဖိအားတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရေတိုင်ကီအဖုံးခေါင်းကွဲထွက်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရေတိုင်ကီအဖုံး ပတ်လည်တစ်ဝိုက်မှာ Coolant တွေစိမ့်ထွက်နေပြီဆိုရင်တော့ အဖုံးအထိုင်မကောင်းတာလား? အဖုံးပဲမကောင်းတာလားဆိုတာ ဖြုတ်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ရေပြန်ဘူးထဲ ရေတွေလျှံတာ
ရေပြန်ဘူးဆိုတာက အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ရေတိုင်ကီထဲမှာ သတ်မှတ်အပူချိန်နဲ့ ဖိအားတစ်ခုရောက်ရင် ရေတိုင်ကီအဖုံးကနေတစ်ဆင့် ရေတွေကိုသွားအအေးခံပေးမယ်။ ပြီးရင် ရေတိုင်ကီထဲပြန်လည်ဝင်ရောက်မယ်ဆိုတာအတွက် လုပ်ထားတာပါပဲ။ အဲဒီလိုလုပ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာ ရေပြန်ဘူးထဲရေတွေ ခဏခဏ ပြည့်လျှံထွက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးက ရေတိုင်ကီအဖုံး Radiator Cap မကောင်းတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ရပ်ပါပဲ။
၃။ ရေတိုင်ကီထဲ လေခိုတာ
ရေတိုင်ကီအဖုံး မလုံဘူးဆိုရင် အဲဒီအဖုံးကနေတစ်ဆင့် ရေတိုင်ကီထဲကို လေတွေဝင်ပြီး လေခိုတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလေဝင်လာတယ်ဆိုရင် အဲဒီလေတွေဟာ ရေတိုင်ကီထဲကနေ အခြားအအေးခံစနစ်လမ်းကြောင်းထဲတွေထိပါ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး Coolant လည်ပတ်မှုစနစ်တွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးကာ ကားအင်ဂျင်ကို Overheat ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကားရေတိုင်ကီနဲ့ရေတိုင်ကီအဖုံးတွေဟာ ကား Heat တက်တာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အဖြစ်အများဆုံးရောဂါတွေပါပဲ။ ကားအင်ဂျင် Heat တက်လာရင်၊ Overheat ဖြစ်ပြီး ပျက်စီးသွားရင် အကြီးစားပြုပြင်မှုတွေ၊ အစားထိုးမှုတွေလုပ်ရမှာမို့လို့ ငွေကုန်ကြေးကျများပြီးအချိန်ကုန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားမမောင်းခင် နေ့စဉ် ဆီ၊ ရေ၊ လေ၊ ဝိုင် သတိဆိုသလို ကားရေရှိ/မရှိ၊ ရေလျော့နေတာ ပုံမှန်ဟုတ်/မဟုတ် အမြဲသတိပြုလေ့လာပြီးမှ ကားကို မောင်းနှင်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားမောင်းနေစဉ် ကားဒိုင်ခွက်မှာ အမြဲသတိပြုကြည့်ရမယ့်အရာတွေမှာ ကား Heat Gauge လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကား Heat Gauge ပုံမှန်ဟုတ်/မဟုတ် ကားမောင်းနေစဉ် အမြဲသတိပြုလေ့လာထားမှသာ Overheat ဖြစ်ပြီး ကားထိုးရပ်တာကို အချိန်မီကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီး ကား Heat တက် ထိုးရပ်တာမျိုးမှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
City Taxi မှတ်ပုံတင်ခြင်းပျက်ကွက်သည့်ယာဉ်များကို အရေးယူမည့် ဥပဒေ အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြသွားမည်ဟုဆို